स्वास्थ्य सेवालाई कम्तीमा १२% बजेट छुट्याईनु पर्ने डा भोला रिजालको तर्क ! – Public Health Concern(PHC)
सरकारको नजरमा स्वास्थ्यको विषय सदैव कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । बजेटको हिसाबले पनि बर्सेनि कम मात्रामा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । कम्तीमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुन आवश्यक देखिन्छ । स्वास्थ्य आम नागरिकको संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर सही ठाउँमा सदुपयोग हुन आवश्यक छ । वास्तवमा उपलब्ध भएको बजेट नै खर्च भइरहेको देखिँदैन । किनभने सोलिड योजना हुँदैनन् । देशभरका अस्पताललाई गुणात्मक र ‘ए वान’ बनाउन आवश्यक छ । जबसम्म जिल्ला अस्पताल गुणस्तरीय बन्दैनन् तबसम्म नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कहिल्यै पनि उकालोतर्फ लम्कन पाउँदैन । त्यसकारण १२ प्रतिशत बजेट सरकारले स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनुपर्छ र त्यो छुट्याइएको बजेटको सही स्थानमा अधिकतम सदुपयोग हुन आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य आम नागरिकको संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर सही ठाउँमा सदुपयोग हुन आवश्यक छ । वास्तवमा उपलब्ध भएको बजेट नै खर्च भइरहेको देखिँदैन । किनभने सोलिड योजना हुँदैनन् । देशभरका अस्पताललाई गुणात्मक र ‘ए वान’ बनाउन आवश्यक छ । जबसम्म जिल्ला अस्पताल गुणस्तरीय बन्दैनन् तबसम्म नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कहिल्यै पनि उकालोतर्फ लम्कन पाउँदैन । त्यसकारण १२ प्रतिशत बजेट सरकारले स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनुपर्छ र त्यो छुट्याइएको बजेटको सही स्थानमा अधिकतम सदुपयोग हुन आवश्यक छ ।
वास्तवमा जसले आफ्नो गर्न सक्दैन त्यसले अरूले गरेको पनि देखि सहँदैन । अन्य देशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा सिट नपाउने विद्यार्थी मात्र निजीमा जान्छन् । त्यहाँका सरकारी मेडिकल कलेजदेखि लिएर अस्पताल यति गुणस्तरीय हुन्छन् भरसक कोही पनि निजीतिर नजाउ भन्ने हुन्छ । तर, यहाँ हाम्रोमा ठीक विपरीत छ । निजी मेडिकल कलेजहरू, अस्पतालहरू अघि बढिरहेका छ । यसलाई पनि देख्न नसकेर अहिले सिध्याउने षड्यन्त्र चलिरहेको छ । जुनसुकै कारणबाट होस् चाहे विद्यालय होस् चाहे क्याम्पस वा अस्पताल होस् । यिनीहरूलाई सिध्याउन एउटा जालो बुनिँदै छ । मलाई लाग्छ यी धराशायी भएर बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । यो गरेर सरकारको कहिल्यै पनि उन्नति हँुदैन ।
सरकारले आफूले त केही गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि निजीलाई कस्नेमै ध्यानमग्न छ । सरकारी अस्पताललाई दिन प्रतिदिन जनताले विश्वास गर्न छाडेका छन्
सरकारले ठूलो हृदय राखेर निजी भए पनि त्यसलाई कसरी सहुलियत दिएर जनताको पहुँचमा पु¥याउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । निजी अस्पतालहरूलाई कसरी सहुलियत बनाउनेतर्फ सरकार जागरुक हुनुपर्छ । तर, झन् सरकार निजीलाई कसेर अघि बढ्न चाहन्छ । निजी अस्पतालमा जति सक्यो कर बढाउन चाहन्छ । त्यसले गर्दा पनि सरकारी र निजी अस्पतालबीचको खाडल बढ्दै छ ।
सरकारले आफूले त केही गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि निजीलाई कस्नेमै ध्यानमग्न छ । सरकारी अस्पतालमा दिन प्रतिदिन जनताले विश्वास गर्न छाडेका छन् ।
जनतालाई सरकारी अस्पतालमा विश्वास गर्ने ठाउँ पनि छैन । अहिले सरकारी अस्पतालमा सामान्य अपरेसन गर्नका लागि पनि महिनांै कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यति बेलासम्म त मान्छे पनि मरिसक्छ । सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । आफ्नोलाई पनि अरूलाई पनि राम्रो स्ट्यान्डड तरिकाले अनुगमन गरेर हेरेमा त नेपाल एउटा शिक्षाका लागि पनि अस्पतालका लागि स्वर्ग हो । यस्तो भएमा दुनियाँभरका मानिसहरू यहाँ आउन खोज्छन् । मेडिकल शिक्षाको हब बनाउनका लागि पहल हुन आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि राजनीतिक दल, कर्मचारी प्रशासन, संघ सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका समन्वयकारी हुन आवश्यक छ । मैले काम गर्न थालेको ५० वर्ष पुग्न थाल्यो । मेरो जीवनकालमा जति सुधार आउँछ भन्ने मैले सोचेको थिएँ त्यो देख्दिन ।
जबसम्म यो राजनीतिमा भ्रष्टाचार भइरहन्छ, जबसम्म भ्रष्टाचारले जरा गाडिराख्छ तबसम्म जति पनि बजेट छ त्यसको ७० प्रतिशत कालो धन भएर अर्काको गोजीमा जान्छ । अनि जनताले के सेवा पाउँछन् ? के उन्नति होला ? के स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार होला भनेर अपेक्षा गर्नु, आमूल परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ रणनीति स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षामा लिने हो भने अवश्य पनि हुन्छ, यसलाई बिगार्नका लागि होइन यसलाई बनाउनका लागि । ग्रामीण भेगका मानिसले सहजै स्वास्थ्य सुविधा पाएका छैनन् । यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
सरकारीतन्त्र अथवा राजनीतिमा जबसम्म स्वच्छता र पारदर्शीता आउँदैन र आफूले पनि नगर्ने अरूले गरेको देख्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हँुदैन तबसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आउन सक्दैन । आफूले पनि नगर्ने र अरूले गरेको कामलाई पनि माफिया भनेर गाली गर्नु, जालझेल गरेर त्यसलाई बन्द गराउने प्रयास गर्नु ।
हामीले मेडिकल शिक्षालाई मेडिकल हबका रूपमा लिएर जाने हो भने विश्वभरका मान्छेहरू यहाँ पढ्न आउन सक्छन्, बिरामीको उपचारका लागि आउन सक्छन् । त्यो किसिमको विकास गर्ने सोच हुनुपर्छ । यी संकीर्णताबाट माथि नउठेर अहिलेसम्म भएका संरचना भत्काएर, एक जनाको पछाडि कुदेर कहिल्यै पनि हुँदैन । भएको संरचनालाई भ्रष्टाचारमुक्त कसरी पार्ने हो त्यो मिलाउनुपर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन्) (राजधानी दैनिकबाट )
Tags: Bhola RijalHealth BudgetHealth Situation Of Nepalhealth workers pen